Ha Dhimin Qiimaynta Dhaqanka PR | Martech Zone
Talaado, Oktoobar 11, 2011 Sabtida, Oktoobar 18, 2014 Douglas Karr
Waxaan ku soo bandhigeynaa shir goboleed maanta waxaanan dhageysanayaa bandhigga PR. Xiriirka dadweynaha leeyahay dhaqaale ahaan, laakiin hay'adaha PR ee xiriirka adag la yeeshay warbaahinta waaweyn way kobcayaan. Hay'addayadu waxay la shaqeysay shirkad, Sida caadiga ah PR, muddo sanad ka badan hada waxaan helnay natiijooyin aan caadi aheyn.
Mid ka mid ah macaamiisheennu wuxuu lahaa bog cusub iyo amar eber khadka tooska ah, laakiin wuxuu u baahday inuu soo saaro baahi badan. Dittoe PR wuxuu awooday inuu bartilmaameedsado joornaalada warshadaha iyo webazines (goobaha wax lagu daabaco ee internetka) oo uu ka helo maqaallo daraasiin iyaga ka mid ah bishii ugu horeysay. Caynsanaanta ayaa naga caawisay inaan horumarino darajadooda mashiinka raadinta waxayna kordhisay muuqaalka astaanteeda… taasoo keentay sicir-riix sare oo kudhaca xayeysiisyada lacag bixinta ee ay bixiyeen.
War-saxaafadeedyada sidoo kale waa fursad la yaab leh. Isku dar ah hagaajinta raadinta, War-saxaafadeed dhowaan aan uqeybiney qaran ahaan shirkad niche ah oo heshay in kabadan 1000 aragti, 4% oo ah guji-dhex-dhexaad ah, iyo in kabadan 30 backlinks xoogan oo kuyaala meertooda. Faa'iidada halkan ku taal ma ahayn tirooyin sare numbers waxay ahayd lambarro aad u sarreeya oo aad ugu sarreeya. War-saxaafadeedyada waxaa si toos ah loogu daabacay dhagaystayaasha saxda ah. War-saxaafadeedka ayaa u horseeday akhristayaasha inay dib ugu noqdaan warqad cad iyo bogga soo degitaanka halkaasoo xogta rajada laga qabtay. Waxaan sidoo kale dib u isticmaalnaa war-saxaafadeedka ku saabsan blog-ka shirkadda… markaa waa wax weyn sidoo kale.
Markaan fiirinayo soo noqoshada maalgashiga, lacagaha lagu bixiyay PR dhaqameed waxay leeyihiin soocelin aad u sareysa oo ku saabsan maalgashiga suuq-geynta - aqoonsiga sumcadda, helitaanka saamileyaasha, taraafikada tooska ah iyo kuwa aan tooska ahayn, iyo ugu dambeyn is-beddelka.
Tags: prxiriirka dadweynahadhaqameed prxiriirka dadweynaha ee soo jireenka ah